९८ दिनपछि खुलेको बजारमा ४८ करोडभन्दा बढीको कारोबार*
नागरिक लगानी कोषका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाए
असार १५, काठमाडौं । ९८ दिनपछि सोमवारदेखि खुलेको शेयर बजारमा रू. ४८ करोड ५३ लाख १५ हजारको कारोबार भएको छ ।
यस दिन बजारमा निकै उतारचढाब देखियो । बजार खुलेको ४० मिनेटमै ४ प्रतिशतको नकारात्मक प्रभाव परेपछि २० मिनेट कारोबार स्थगित भयो । सोमवारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ८७ अंकले घटेर १ हजार १८८ दशमलव ७० विन्दुमा झरेको छ ।
यस दिन १४७ ओटा कम्पनीको १४ लाख ४४ हजार १७३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबारमा आएको १२ समूहमध्य व्यापारिक , उत्पादन तथा प्रशोधन जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक बढेको छ भने अरुको घटेको छ । व्यापारिक समूहको ५ दशमलव २४ प्रतिशत , उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ४ दशमलव ३१ प्रतिशत , जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ६५ प्रतिशत र अन्य समूहको ३ दशमलव १३ प्रतिशतले परिसूचक बढेको हो ।
सोमवार सबैभन्दा बढी विकास बैंकको परिसूचक ३ दशमलव ७४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको रू. ३ करोड ५७ लाख १० हजार बराबरको कारोबार भएको हो ।
घटेको बजारमा चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्क सर्किट
घटेको बजारमा पनि चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नागरिक लगानीकोष , हिमालयन डिष्टिलरी , नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
सोमवार नागरिक लगानीकोषको शेयरमूल्य रू. १८८ , हिमालयन डिष्टिलरीको रू. १२०, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको सर्वसाधारण तर्फको शेयरमूल्य रू. ३५ र संस्थापकतर्फको शेयरमूल्य रू. ३० ले बढेको हो ।
पहिलो कारोबारमै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्यमा नकारात्मक सर्किट
लकडाउनका विच सर्वसाधारणलाई आईपीओ बाँडफाँट गरि सूचीकृत गराएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्यमा पहिलो कारोबारमै नकारात्मक सर्किट लागेको छ । पहिलो कारोबार रू. ४२४ मा खुलेको थियो । कारोबारको ४० मिनेटमै रू. ४२ ले शेयरमूल्य घटेर घटेको हो ।
त्यस अवधिसम्म ९ दशमलव ९१ प्रतिशतले शेयरमूल्य घटेपछि सर्किट लागेको थियो । यो कम्पनीसँगै स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था र आशा लघुवित्तको शेयरमूल्यमा पनि नकारात्मक सर्किट लागेको छ । स्वावलम्वन लघुवित्तका शेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् । यस कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ११७ ले घटेको छ ।
*९८ दिनपछि सोमवार खुलेको शेयर बजारमा रू. ४८ करोड ५३ लाख १५ हजारको कारोबार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ –सं
आईफोन एसई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जेनेरेशन नेक्स्ट[२०७७ असार, २६]
नेप्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुब्बा[२०७७ असार, २६]
ऋण तिर्ने ताकेता नगर्न बैंकहरूलाई पश्चिमाञ्चल होटेल संघको आग्रह[२०७७ असार, २६]
साताको अन्तिम दिन १३३१.१० विन्दुमा नेप्से, ९० करोडभन्दा बढीको कारोबार [२०७७ असार, २५]
०.१० % बढ्यो नेप्से, तीन घण्टामा ६० करोडभन्दा बढीको कारोबार (२ बजेको अपडेट) [२०७७ असार, २५]
नेप्से स्थिर, दुई घण्टामा ४३ करोडभन्दा बढीको कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७७ असार, २५]
१० अंकले घट्यो नेप्से, एक घण्टामा १६ करोडभन्दा बढीको कारोबार [२०७७ असार, २५]
कारोबार भएको पहिलो दिनमै एनआईसी एशिया लघुवित्तको शेयर मूल्यमा ९.९७ % वृद्धि[२०७७ असार, २५]